I-WeTransfer: yintoni kwaye isebenza njani? | Iindaba zeGajethi
I-WeTransfer: yintoni kwaye isebenza njani?
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi, software
Siza kuthetha ngesicelo esele sisenza indawo phakathi kwezona zidumileyo ngokudluliswa kwefayile kunye nokugcinwa kwelifu. Ukuba ufuna ukugqithisa rhoqo iifayile ezinkulu kubasebenza nabo okanye kumphathi wakho, zimbalwa izicelo kwimarike ezinokutshatisa i-WeTransfer. Oku kuhle ngakumbi xa ufuna ukuthumela iifayile ezingavunyelwanga yile imeyile. Ungayisebenzisa simahla kwaye ayikubuzi ukuba urhumele ukuthumela okanye ukufumana iifayile.
Njengoko besesitshilo, i-WeTransfer okwangoku iphakathi kwezona zicelo zidumileyo zolu hlobo. Siza kuchaza ngokweenkcukacha ukuba kutheni esi sicelo sicetyiswa ngaphezulu kwezicelo ezinje ngeDropbox ukuze isetyenziswe njenge ukugcinwa kwelifu. Nangona eyona nto inomdla ngokungathandabuzekiyo kukuhanjiswa kweefayile ngaphandle kobhaliso lwangaphambili phakathi kwabasebenzisi. Funda ukuze ufumanise ukuba yintoni i-WeTransfer kwaye isebenza njani.
1 Yintoni i-WeTransfer?
1.1 Izibonelelo zokusebenzisa i-WeTransfer
2 Ungayisebenzisa njani
2.1 Eyona ndlela ilula
3 Sebenzisa i-WeTransfer kwiselfowuni
I-WeTransfer liqonga elikwi-Intanethi elisekwe kwilifu kwaye lenzelwe ukuba ukwazi ukuhambisa iintlobo ezahlukeneyo zeefayile kwabanye abasebenzisi bakhululeke ngokupheleleyo kwinethiwekhi. Ibe sesinye sezona zicelo zaziwayo kweli candelo ngenxa yokusebenziseka kwayo, isantya sayo kwaye, ngaphezulu kwako konke, iindleko zayo ezi-0. Ku luncedo kakhulu ukuthumela iifayile ezinkulu kakhulu kumntu omnye okanye kubantu abaninzi ngexesha elinye, usebenzisa iakhawunti ye-imeyile kuphela.
Enye yeenzuzo zayo ezibalaseleyo ezenza ngaphezulu kwezinye iindlela kukuba ayifuni nokubhaliswa kwangaphambili. Ayibuzi umamkeli wefayile nokuba. Ke sinokwenza imisebenzi ngaphandle kokukhathaza ukufaka okanye ukudibanisa imeyile kunye nayo nayiphi na irekhodi, khetha ifayile kwaye uyithumele usebenzisa iakhawunti ye-imeyile.
Izibonelelo zokusebenzisa i-WeTransfer
Esi sicelo asisifuni kulo naluphi na uhlobo lobhaliso, kodwa ukuba senza njalo sinokwenza iiakhawunti zakho, sinayo ne Isicwangciso sokuhlawula esinokonwabela ezinye iindlela eziphambili. Eyona ibalaseleyo ngokungathandabuzekiyo thumela iifayile ukuya kuthi ga kwi-20 GB endaweni ye-2 GB esinokuthi siyidlulisele simahla.
Esi sicwangciso sikwasinika ezinye izibonelelo eziluncedo kakhulu kumsebenzisi ohambele phambili. Indawo eyi-100 GB yokugcina efini, i-GB ezininzi ukuba siza kugcina iividiyo ezininzi okanye iiFoto, kunye neeprojekthi. Sinobuchule bokwenza iakhawunti yethu ngendlela eyahlukileyo kwiphepha apho abanye abasebenzisi banokukhuphela iifayile zethu ekwabelwana ngazo. Esi sicwangciso sentlawulo siye Ixabiso le- € 120 ngonyaka okanye i- € 12 ngenyanga.
Njengoko besesitshilo ngasentla, akukho bhaliso lwangaphambili luyimfuneko ekusebenziseni inkonzo yokwabelana ngefayile ka-WeTransfer. Eyona ndlela ilula kwaye ekhawulezayo yokusebenzisa le nkonzo ngokuthe ngqo kwi-web browser.
Kuqala sifikelela kwiphepha lakho iwebhusayithi esemthethweni kwisikhangeli sethu sewebhu. Kwimeko yokuqala, iya kusibuza ukuba ngaba sifuna ukusebenzisa uhlobo lwasimahla okanye ukuba sikhetha ukwenza isivumelwano nesicwangciso sokudibanisa kunye nezibonelelo ezichazwe apha ngasentla. Sinqakraza ukundisa eFree ukuthumela iifayile zethu ezinkulu simahla.
Ngoku siza kuzifumana kwiphepha lenkonzo, kunye noyilo olunomtsalane esinokuthi kuphela kulo khetha ukhetho oluvela kwibhokisi ekhohlo. Ixesha lokuqala esilisebenzisa ngalo, kufuneka samkele iimeko kwaye samkele ikhontrakthi (into eqhelekileyo kuyo nayiphi na inkonzo ekwi-intanethi). Cofa ukwamkela kwaye uqhubeke.
Ngoku ibhokisi iya kutshintsha ukubonisa enye apho i ukuhambisa idatha yeefayile zakho. Sigcwalisa ukuze uqhubeke.
Cofa kwiqhosha + ukongeza iifayile esifuna ukuzithumela kwikhompyuter yethu. Ukwenza oku, isikhangeli sethu siza kuvula umhloli wefayile ukuze azikhethe. Khumbula ukuba ngohlobo lwasimahla ubungakanani obukhulu kwifayile nganye yi-2 GB. Ngokupheleleyo, oko kukuthi, ukuba sikhetha iifayile ezininzi, akufuneki zidlule kwi-2 GB ngokobunzima.
Emva kokudibanisa iifayile esifuna ukuzithumela, sicofa i icon yamachaphaza ama-3 ukuba sisekhohlo ukuya khetha indlela esifuna ukwabelana ngayo ngeefayile.
Sinezinto ezimbini esinokukhetha kuzo. Ukuba sikhetha ukhetho lwe-imeyile, WeTransfer Iyakhathalela ukufaka iifayile kwilifu layo kwaye nje ukuba inkqubo igqityiwe iya kuthumela i-imeyile kwidilesi oyifakayo, ibonisa kumamkeli ukuba uzithumele ezinye iifayile abanokuzikhuphela ngokuchofoza ikhonkco imeyile.
Enye inketho "Ikhonkco" eya kuthi ivelise ikhonkco lokwabelana ngesicelo semiyalezo esifana ne Yocingo okanye WhatsApp. Eli khonkco lithumela umamkeli kwiphepha le-WeTransfer ukuze bakwazi ukukhuphela iifayile kwikhompyuter yabo apho.
Ukuba sinesicwangciso sokuhlawula, Senza iinketho ezininzi ezisivumela ukuba siphucule ukhuseleko lweefayile zethu kwaye umisele umhla wokuphela kwabo.
Eyona ndlela ilula
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho lwe-imeyile lolona lukhuselekileyo kwaye lulula, kuba iyakwanela ukufaka idilesi ye-imeyile yomamkeli ngaphandle kokuxhomekeka kubukho bayo okanye kweso sicelo somyalezo. Singongeza umyalezo kunye nemiyalelo xa kukho imfuneko.
Nje ukuba iifayile zithunyelwe, kuya kuboniswa igrafu ngepesenti yokusebenza egqityiweyo. Ngelixa le pesenti igqityiwe asinakuvala isikhangeli sewebhu, kwaye singayicimi ikhompyuter. Ixesha lokudlulisa lixhomekeke kunxibelelwano lwethu lwe-intanethi kunye nokuzaliswa kweseva.
Xa sigqibile siya kufumana i-imeyile kwidilesi esibonisileyo ukuba isazise ngokugqitywa kokudluliselwa. Kananjalo nomamkeli uya kufumana i-imeyile ekwazisa ngokwamkelwa kweefayile zokukhuphela. Xa umamkeli ekhuphele iifayile, siya kufumana kwakhona i-imeyile ekwazisa ngokufunyanwa kunye nokukhuphela kwabo.
Sebenzisa i-WeTransfer kwiselfowuni
Sinokukhetha ukuthumela iifayile kwi-Smartphone yethu, Olona khetho lulungileyo koku kukufaka usetyenziso iOS okanye i-Android. Ukusebenza kwiinguqulelo eziphathwayo kuyafana nakwiphepha lewebhu, kufuneka ukhethe ifayile esifuna ukwabelana ngayo kwaye ukhethe usetyenziso okanye inkqubo esiza kuthumela kuyo ikhonkco lokukhuphela.
Umthuthukisi: Idlulisela iBV
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-WeTransfer: yintoni kwaye isebenza njani?
I-Amazon Fire TV Stick (2020), iklasikhi eqhubeka nokusebenza